Al-shabaab oo dishay 20 kamid ah ciidamada Booliska Kenya - iftineducation.com
Al-shabaab oo dishay 20 kamid ah ciidamada Booliska Kenya
iftineducation.com – Waa weerarkii saddexaad ee todobaad gudihii ka dhacay gobolka.
Booliiska Kenya ayaa sheegtay in 13 Askar oo ka mid ah ciidamada booliiska dalkeeda ay ku maqan yihiin weerar gaadmo ah oo ay xalay ku qaaday Al-shabaab Kolonyo Ciidamada Booliiska Kenya ah oo marayay Deegaanka Yumbis oo ku dhow degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi-bari Kenya.
“Weerarku wuxuu ahaa mid gaadmo ah oo lagu qaaday gaadiid ay ciidammo booliis ah wateen, kuwaasoo roondooyin ka sameynayay deegaan ku dhow Gaarisa, hadda waxaa maqan 13-sarkaal oo booliiska Kenya ka tirsan,” ayuu yiri afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo, George Kinoti.
Afhayeenka ayaa Hadalkiisa ku daray. “Ciidamadii Dhaawacyada ahaa Waxaa la Geeyay Isbitaalka halkaasoo lagu daweynayo.” Wuxuuna raaciyay. “Saraakiisha la la’yahay waxaa filaynaa inay ku maqan gacanta xoogagga Al-shabaab.”
Sidoo kale, taliyaha booliiska degmada Gaarisa, James Kianda ayaa isna sheegay in askarta dhimatay aan weli la xaqiijin karin tiradooda, iyadoo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ay iyaduna sheegay inaan la xaqiijin karin tirade askarta weerarkii xalay lagu dilay.
Qaar ka mid ah saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in Weerarka lagu laayay Askarta Booliiska Kenya ay ahaayeen miinooyinka dhluka lagu sii aasay, Kuwaasoo lala beegsaday gaadiidka ay ciidamadu wateen.
Deegaanka uu Weerarkani ka dhacay ayaa u jirta Magaalada Gaarisa Qiyaastii in ka badan 80-km, iyadoo kaga beegan dhanka Waqooyiga, waxaana mas’uuliyadda Al-shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa weeraro ka gaysta gobolka, waxaana ka mid ahaa weerarkii bishii hore lagu xasuuqay 148 qof oo u badnaa arday jaamacad ka dhiganaysay Gaarisa.
Waxaa jira walaac laga qabo in dawladda ay ka gaabisay jawaabtii looga baahnaa in ay si dagdag ah uga bixiso weerarada al-shabaab.
Madaxweynaha Somaliya “Waan u mahadcelinayaa walaalaheena Afrika sida ay inoo garab qabteen”
The Mirror oo kashifay in Mo Farah uu Arooskiisa ka qariyay Aabihiis